I-Salonist Spa ne-Salon Management Platform: Ukuqokwa, Inventory, Marketing, Payroll, nokuningi | Martech Zone
I-Salonist isoftware yesalon esiza i-spa nama-salon ukuphatha amaholo, ukukhokha, ukubandakanya amaklayenti akho, nokwenza amasu wokumaketha. Izici zifaka:
Ukuqokwa kwama-Spas nama-Salon
Ukubhuka Ku-inthanethi - Usebenzisa i-smart Salonist Online yokubhuka kwesoftware, amakhasimende akho angakwazi ukuhlela, ukuhlela kabusha, noma ukukhansela ama-aphoyintimenti noma ngabe ukuphi. Sinobuchule bewebhusayithi nohlelo lokusebenza obungahlanganiswa ne-Facebook ne-Instagram izibambo zokuxhumana. Ngalokhu, inqubo yokubhuka ephelele izenzakalelayo ngokuphelele. Akukho ukubhuka okuphindwe kabili. Ukuvalelisa kokungaboniswa no-Salonist.
Slot Blockers - Misa ukuchitha isikhathi sabasebenzi namakhasimende ngokunikeza izikhala zesikhathi ezingatholakali kukhalenda lakho. Ngama-slot blockers wokubhuka ku-inthanethi, unamandla okukhombisa kuphela izikhala ezitholakalayo, ezikhawulela ukubhuka ngokweqile kokuqokwa ngaphakathi kwesikhathi esithile.
Ukubhuka kwamahora - Nikeza amakhasimende akho ukuguquguquka okwengeziwe ekubekeni ama-aphoyintimenti, ngisho nangaphandle kwamahora ebhizinisi, ngokusebenzisa isoftware yokuphatha. Nge-software enhle kunazo zonke, ibhizinisi lakho lingagudluza noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi. I-Salonist yakhelwe ukugcina ukungena kwamakhasimende akho kungaguquguquki, ngenkathi kubhuka ngokulula nganoma yisiphi isikhathi nanoma ikuphi.
Ukubhuka kwephakheji - Jabulela inkululeko yokwenza amaphakheji wezinsizakalo ezahlukahlukene ngezixhumi ezilula. Ngale software yokuphatha amaklayenti, ungakhuphula ukuthengiswa nemali engenayo kuma-studio akho ngokwenza kube lula kumakhasimende ukubeka ukubhuka ngokususelwa kokuthandayo. Isoftware ye-salonist nayo inkulu ekwandiseni ukwethembeka kwamakhasimende akho ngamaphakheji we-salon angenamthungo ezandleni zawo.
Ukubhuka Kobulungu - Nikeza amakhasimende akho isisusa sokuhlala ethembekile usebenzisa ubulungu ekubhukheni okuku-inthanethi nasekuhleleni isici. Ku-Salonist, abanikazi be-salon bangaqhuba uhlelo lokuthembeka olunikeza amalungu izaphulelo zezinsizakalo ezithile. Lokhu kufakazelwe ukuthi kukhulisa ukukhula kwe-salon futhi kukhuphule amazinga okugcinwa kwamakhasimende.
Yamukela Izinkokhelo - Kungaba umxhwele kangakanani ukuba nesoftware engcono kakhulu eyenza ukwamukela izinkokhelo kube nomoya? I-Salonist iza newijethi yokubhuka eku-inthanethi exhunywe ne-Paypal, Stripe, ne-Authorize.Net. Abanikazi beSalon bangathola izinkokhelo ngezinsizakalo zakho ngokumane bavumelanise ukuthenga nalewijethi kusoftware yethu yokuphathwa kwesalon. Ungamukela futhi zonke izinhlobo zokukhokha ngePhoyinti lethu Lokuthengisa elihlanganisiwe.
Ukumaketha kwama-Spas nama-Salon
imeyili Marketing - Thumela imikhonzo yokugubha usuku lokuzalwa, izinhlelo zobulungu, kanye nokuqinisekiswa kokuqokwa ngemizuzu engaphansi kwemihlanu usebenzisa izinsizakalo zokumaketha ze-imeyili zeSalonist. Ukumaketha nge-imeyili kuyindlela enhle yokwandisa ama-aphoyintimenti ezinsizakalo zakho ze-salon ne-spa. I-Salonist imayelana nokwenza ngcono amazinga wokugcinwa kwamakhasimende nokwenza imali ephezulu yenkampani yakho.
Buyekeza Ukuphathwa - Ukubuyekeza kuyindlela enhle yokukhombisa umhlaba ukuthi wenza okuthile okulungile. Kukusiza ukuthi uvikele amakhasimende amaningi ngenkathi uwagcina ethembekile. Isoftware yokuqokwa kwe-Salonist ikuvumela ukuthi uthole impendulo yesikhathi sangempela evela kumakhasimende akho ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho. Ngemiyalo ethunyelwe nge-SMS ne-imeyili kuma-Smartphones awo ekuphathweni kahle kwamakhasimende, ungahlala uxhumekile kumakhasimende akho.
Ukuphathwa kwekhuphoni - Uma kukhona into eyodwa amakhasimende ayithandayo, yizinsizakalo zamahhala. Klomelisa amakhasimende akho ngokuxhaswa kwawo ngesaphulelo kanye nokunikezwa kwekhuphoni kuwo wonke ama-oda wokuvuselela. Ayikho inqubo eyinkimbinkimbi ehilelekile. Ungaphatha leli lungelo kusuka kuthebhu ethi Khiqiza i-Salon and Spa Discons Coupons ku-software ye-smart salon. Gcina amaklayenti akho eza nenqwaba yezaphulelo.
Amakhadi ezipho - Nikeza amakhasimende akho ithuba lokupha abathandekayo babo izinsizakalo zakho ngezikhathi ezikhethekile. Noma ngabe kungusuku lokugubha usuku lokuzalwa noma lokuzalwa, ikhadi lesipho elenzelwe wena kuSalonist lingakusiza ukuthi uhlanganyele namakhasimende angaba khona. Ipulatifomu ibazisa ngokushesha nge-imeyili noma nge-SMS.
Uhlelo Lokuthembeka - Izinhlelo zokwethembeka ngokuphathwa kwamakhasimende zingenye yezinhlelo ezinhle zokuvuza kumakhasimende akho. Lokhu kuzosiza ekwenzeni ngcono ukuvama kokuhambela kwabo. Bheka isoftware ye-Salonist ukuze ufinyelele kalula ezinhlelweni zokwethembeka ezizothuthukisa ukudluliselwa kwamakhasimende akho ngokushesha, ukuzibandakanya nokuvikeleka.
Imikhankaso ye-SMS - Nciphisa ukuthi kungenzeka ukuthi akukho-imibukiso evela kumakhasimende akho. AbakwaSalonist bakusiza ukuthi uhlale uxhumene nabo ngokusebenzisa izikhumbuzo zokuqokwa, ukuzibandakanya kwamakhasimende, imikhankaso yokuphromotha, nokunye okuningi. Khulisa ibhizinisi lakho le-salon ngokungena engxoxweni namakhasimende akho futhi wazi kahle ukuthi bafunani.
Ngaphezu kokusetha i-aphoyintimenti nokumaketha, I-Salonist kufaka phakathi ukuphathwa kwamakhasimende, ama-aphoyintimenti akhokhelwa kusengaphambili, ukuphathwa kwempahla, ukuphathwa kwezindleko, ukuphathwa kwendawo, isitolo esiku-inthanethi, izibalo, indawo yokuthengisa, uhlelo lokusebenza lweselula, amafomu aku-inthanethi nemibiko enemininingwane. Le software ye-salon ifakwe konke okudingayo ukukhulisa imali, ukonga isikhathi, ukuthuthukisa ukubonakala komkhiqizo, nokwenza izinqumo ezihlakaniphile embonini yobuhle. Hlola izici zaleli thuluzi elithandwa kakhulu futhi ulungele ukwenza ibhizinisi lakho libe ngcono.
Amakhasimende abo afaka izitolo zokugunda izinwele, ama-salon wezinwele, abelaphi be-massage, ama-spoon, ama-spas, ama-salon womshado, isoftware yezokwelapha, isikhumba sobuhle, abaculi be-tattoo, abaqashisa ngamadokodo, ama-salon okushuna, kanye nabahlanza izilwane.
Ukudalulwa: Ngingumxhumanisi we- I-Salonist.
Tags: isikhumba sobuhleAma-Analyticsukusethwa kwe-aphoyintimentiizindawo zokugunda izinweleabaqashi bamadokodoama-salon wabashadikaziukuphathwa kwamakhasimendeukuphathwa kwezindlekoizinwele zezinweleukuphathwa kwempahlaukuphathwa kwendawoabelaphi abasebenza ngokuzivocavocaisoftware yezokwelaphaisicelo mobileizipikili zezipikiliamafomu aku-inthanethiesitolo onlineabalungisa izifuyoiphuzu lokuthengisaPOSama-aphoyintimenti akhokhelwa ngaphambi kwesikhathiukumaketha kwe-salonizikhalanokucwilisa nokucwalaabaculi be-tattoo
I-Influ2: Ipulatifomu yokukhangisa esekwe kuMuntu (i-Akhawunti Eyisisekelo Yokukhangisa)
Landa: Umhlahlandlela Ocacile Futhi Ophelele Wokuhlangenwe nakho Okususelwe ku-Akhawunti (ABX)